Taariikhaha – Page 8 – Filimside.net
Super Star Akshay Kumar filimkiisa Toilet Ek Prem Katha maanta ayuu si rasmi ah 100 Crore darajo ahan sida shabakada Boxoffice India shaaca ka qaaday halka shalay ay baahiyeen kooxda iska leh inuu darajadaan gaaray. […]
Filimka Mujhse Dosti Karoge! waa filim jaceyl seddax geesood ah ee hogaamiyaal ka yihiin Hrithik Roshan, Rani Mukerjii Iyo Kareena Kapoor. Waxaa hori idinla wadaagnay xaqiiqooyin u gaar ah filimkaan haatan waxaa idin heynaa sida […]
Filimka Jeet wuxuu soo baxay 23-kii August 1996 wuxuuna noqday filim magac weyn, maamuus iyo maqaam ilaa hataan fanka Hindiya ka jiro ka tagay. Jeet waxaa wada jileen xiligiisii Sunny Deol oo ahaa atoore awood […]
Filimka Gentleman: Sundar, Susheel, Risky ayaa maanta subaxdii hore xiliga Hindiya tiyaatarada la saaray waana filim Action ah oo ay hogaamiyaal ka yihiin Siddharth Malhotra iyo Jacqueline Fernandez halka Suniel Shetty door xumaan ah ku […]
Super Star Ajay Devgn filimkiisa Baadshaho sidoo kalena ay ku wehliyaan Emraan Hashmi, Ileana D’Cruz iyo Vidyut Jamwal ayaa ganacsi dhex dhexaad ah sameeyay maalintiisa kowaad. Sida shabakada Boxoffice India xaqiijisay Baadshaho maalintiisa kowaad wuxuu […]
Ajay Devgn wuxuu muujiyay in awoodiisa Boxoffice-ka bilaabashada weli taagan tahay madaama Baadshaho maalinta kowaad 10 Crore ku bilaawday. Sida Boxoffice India horey noogu cadeesay 9-atoore oo xidigo awood u leh inay filimada gadaan ayay […]
Shabakada Boxoffice India ayaa soo daabacday in Baadshaho uu kaalinta 8-aad ka galay filimada maalinta kowaad sanadkaan lacagaha ugu badan soo xareeyeen. Filimka Baadshaho wuxuu keenay maalinta kowaad 10.15 Crore (Trade Figure) waa lacagaha ay […]
Bisha August waa gabo gabo maanta ayay ku eg tahay madaama 31 tahay waxaan dib loo milicsada 4-tii todobaad ee lasoo dhaafay filimada tiyaatarada la saaray iyo saameyntii ay la imaadeen. Si guud August waxaa […]